7 Izindlela Simple Amenza Fall in Love
Ngakho uke eliwele inhloko-phezu-izithende umuntu, manje lokho? Izinyathelo ngezansi elula kuzosiza ukwenza emnikela ezijulile kunawe.
Isinyathelo Simple #1: Smile Always
Flashing a smile bangempela kaningi ngangokunokwenzeka kukwenza ube nedumela engeneka. Kungakhathaliseki lokhu kumamatheka imiklomelo bakho kuhloswe guy yakho noma isikhashana ngesikhathi, smiling kuyosiza ujabule nakho kuzokwenza guy yakho ufuna ukuchitha isikhathi esithé xaxa nawe.
Ithiphu: Lapho senza emehlweni uthando lwakho, kancane Smile sivumele kwasakazeka lonke ubuso bakho. Once uyayiqaphela, zokuphola bheka phansi. Lokhu kuyokwenza angenakuvinjwa.
Isinyathelo Simple #2: Bonisa Konke
Changing for ubani, ingasaphathwa umuntu is a recipe for inhlekelele. Sonke sinamandla amazing zobuntu kungani ungabheki ukugqamisa labo? Ngeke nje kuphela lokhu siziqhayise akusilo ithemba lakho yini, kodwa kuzokwenza ukuthi esikhangayo okuningi indoda yakho.
Ithiphu: Simply ukwenza umzamo ukubheka okuhle. Gcina izinwele zakho zihlanzekile futhi isitayela, thola ngephunga isignesha, njalo babe ukuphefumula fresh, bafake lipstick, futhi uqiniseke ikhabethe lakho lihlanzekile futhi ofanelana.
Isinyathelo Simple #3: Yiba Mysterious
Ukuze abonakale eyinqaba futhi angenakuvinjwa, ufuna ukushiya wena muntu ezibuza ngawe.
Ithiphu: Uma ubuza indaba yakho, kuphela mtshele imininingwane embalwa ke ukumamatheka futhi uthi “bonke abanye mina ngeke umsindise for ngesinye isikhathi”. Futhi, abamlindayo ukuxhumana nawe. Lapho enza kanjalo, qiniseka ukuthi zingaphenduli ngaso leso sikhathi. Akukona nje kuphela ngeke abe ucabanga ngawe sonke isikhathi kodwa uyophinde abe umxhwele ukuthi une izinto ofuna ukuzenza kuka dote kuye usuku lonke.
Isinyathelo Simple #4: Njalo amshiye Efuna Ngini
Ukushiya umuntu wakho efuna okwengeziwe uhlale umqondo omuhle. Uma ingxoxo ngaphambi kokuthi lidala futhi kuyisicefe, yena ngeke ngokushesha babheke phambili esikhathini esizayo uma inkulumo ezimbili.
Ithiphu: Kungakhathaliseki ukuthi ithumelelana nothile imiyalezo ngemva, Email i, noma ingxoxo ubuso nobuso kuvimbe ingcoco ngaphambi silence kwenzeka. Futhi, qinisekisa ukuthi cha ngokweqile uxhumane naye. Uma Ungazenza yini utholakalele kakhulu, wena izovela okucindezela ukuba uthenge okuthile kakhulu.
Isinyathelo Simple #5: ngobuqili Flirt
bephonsa ezicashile, Amacebo unesithakazelo kumuntu kuyomsiza ukuba bazethembe ubuhlobo ukuthi nina nobabili usuqala.
Ithiphu: Abanjwe embuka kusukela ngaphesheya ekamelweni, ugcine umzimba wakho ulimi ngokukhululekile Angling umzimba wakho kuyo, futhi lapho ithuba ophakamayo bakugcone kuye. Futhi, Uvumelani ethukile twirl izinwele zakho noma ukuluma lip yakho njengoba ezokwenza ambonise ukuthi ukhangwa kuye.
Isinyathelo Simple #6: Yiba Ezicabangelayo ngakuyo
Bonisa ukuthi Uqaphelile yini akwenzayo futhi ucele ukumsiza ngaphambi kokuba ubuza. Ngokugcina isenzo esincane, nomusa wenu kuyoba ngaphezu zenani elingaphezu.
Ithiphu: Ukuthi phakathi iphrojekthi kuyisicefe noma ugula, bembonisa uyathanda ngokuchitha isikhathi naye kuzobonisa ukuthi wena bangisekela nokukhuliswa.
Isinyathelo Simple #7: Iba Positive Force ekuphileni kwakhe
Yiba umuntu omuhle phambi kwakhe by kuhloswe ukuba sibe nombono oqondile kungakhathaliseki isimo noma ingxoxo. Kulula okuningi ukuthandana nomuntu omuhle Ukuqhathanisa umuntu ohlale ekhona uma wokukhononda.
Ithiphu: Nakuba abanye kahle futhi ukukhononda Kulungile, azame ukugcina impilo yakho mihle kakhulu ekhumbula isikhathi sakho ndawonye njengoba afudumele futhi fuzzy.
Nakuba kungenakwenzeka ukuba “ukwenza” nanoma ubani ukuba azizwe ngendlela ethile, okubonisa unethemba yakho futhi nemvelo abakhathalelayo eyokhuthaza futhi cathulisa imizwa yakhe ohlangothini kwesokudla.